I-Xiaomi Mi 8: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
I-Xiaomi Mi 8: Iflegi entsha yentsimbi ngoku isemthethweni
Usuku lufikile. Ukusukela namhlanje, nge-31 kaMeyi, umsitho weXiaomi ubanjelwe apho uphawu lwaseTshayina lusishiya neendaba ezimbalwa. Eyona ilindelwe kakhulu kuzo zonke yinkcazo yeflegi yayo entsha, iXiaomi Mi 8. Into esele yenzekile. Ifowuni entsha kraca ephezulu ngoku isemthethweni. Emva kweeveki ngamarhe kunye nokuvuza, sele siyazi yonke into malunga nesixhobo.
Le Xiaomi Mi 8 yifowuni apho uphawu lufuna ukubhiyozela unyaka wesibhozo kwimarike. Umzuzu ophambili kuphuhliso lwayo, oza kwelinye lawona maxesha okuphumelela kwefemu. Into abafuna ukuyibonisa kwesi siphelo siphezulu. Yintoni esinokuyilindela kuyo?
Ifowuni itsala umdla kuyilo apho inotshi ilawula khona isikrini. Iinkcukacha eziza kubangela uninzi lwezimvo, ngakumbi ezimbi. Yintoni egqithisile, abaninzi baya kubona ukukhuthazeka okumangalisayo kwi-iPhone X uyilo ngobulumko kwifowuni.
1 Ukucaciswa kweXiaomi Mi 8
Ukucaciswa kweXiaomi Mi 8
Uphawu lwesiTshayina luye lwaphosa konke okunye kwisixhobo. Sijongene nomphezulu ogcweleyo woluhlu, Ebizelwe ukukhokela ikhathalogu yefowuni yeXiaomi. Ngaphandle kwamathandabuzo, imele ukutsiba kumgangatho xa kuthelekiswa nesizukulwana esidlulileyo, ukongeza kutshintsho kuyilo lwayo. Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
IsikriniI-6.21-intshi ye-AMOLED ene-19: 9 ratio kunye nesisombululo se-FullHD + (2280 x 1080)
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 845
i-ram: I-6 GB
Ukugcina ngaphakathiNgama-64GB / 128GB / 256GB
Cámara traseraI-12 + 12 MP enezinto ezisebenzisa f / 1.8 kunye f / 2.4 Dual LED Flash, PDAF focus, four-axis OIS, HDR and 4K Video at 60fps
Ikhamera yangaphambili: 16 MP ngokuvula f / 2.0
Ibhetri: 3.300 mAh ngentlawulo ekhawulezayo
Conectividad: 4G, WiFi n / ac, iBluetooth 5.0, NFC, uhlobo lwe-C C, iGPS
UbukhuluUbukhulu: 154,9 x 74,8 x 7.6 mm
U bunzima: Iigram ezili-172
abanye: Isivamvo somnwe weminwe, ukuvulwa kobuso, infrared, Splash ukumelana
Ngale Xiaomi Mi 8 ifemi ekugqibeleni inikezela kwinotshi. Inkcukacha ekubonakala ngathi azizukuyamkela, nangona zintle kakhulu kwintengiso. Nangona ekugqibeleni baye baphela ngokuncama kwaye ikwenza ukubonakala kuluhlu oluphezulu. Inkcukacha ongayithandiyo, kodwa ngokungathandabuzekiyo ilawula uyilo lwefowuni ngaphambili. Abanye, babheja kwiscreen se-AMOLED ngezakhelo ezibhityileyo.
Emuva sifumana ikhamera ephindwe kabini, icwangciswe ngokuthe nkqo, ene-LED. Njengoko kulindelekile, ubukrelekrele bokudlala buza kudlala indima ekhokelayo kwezi khamera. Kuba banikwe amandla yiyo. Ke sinokulindela lukhulu kwiikhamera eziphezulu zohlobo lweTshayina.
Ifemi ikhethe ifowuni enamandla. IXiaomi Mi 8 ineyona processor ihamba phambili kwintengiso, kwaye oku kuyakunika amandla amakhulu. Ukongeza ekusebenziseni amandla asezantsi, okuya kwenza ukuba kube nakho ukufumana okungaphezulu kwebhetri ye-3.300 mAh, ukongeza kwirhafu yayo ekhawulezayo.
UXiaomi akafuni ukuthatha umngcipheko kwaye ukhethe i-sensor yeminwe ngasemva. Yintoni egqithisile, sinobuso obaziwayo kwaye sidibanise inzwa ye-NFC. Ukuze umsebenzisi akwazi ukwenza iintlawulo eziphathwayo ngokufanelekileyo. Lo msebenzi ufumana ubukho, kodwa kubaluleke ngakumbi e-China, apho uninzi lwentlawulo lwenziwa ngeefowuni eziphathwayo.
Sibonile ukuba kuyakubakho iinguqulelo ezintathu zefowuni ephezulu ngokuxhomekeke kwindawo yokugcina. I-RAM ihlala ifana kuwo onke amatyala, kodwa inokukhethwa ngocwangciso olufunwayo lokugcina. Siza kuba neendlela ezintathu: 6/64 GB, 6/128 GB okanye 6/256 GB. UXiaomi ke ujoyina umkhwa wokunika indawo eninzi yokugcina esiyibonayo kulo nyaka.
Inguqulelo yokuqala yefowuni, ene-6 GB ye-RAM kunye ne-64 GB yokugcinwa kwangaphakathi, iya kuxabisa i-2.699 yuan, ethi utshintsho lumalunga nee-euro ezingama-360.
Kwelinye icala, inguqulelo yeXiaomi Mi 8 ene6 / 128 GB iya kuxabisa i-2.999 yuan, ekufuneka uyitshintshe zimalunga nama-400 euros.
Okokugqibela kweenguqulelo zokugqibela, ezine-6/256 GB, iya kuba yeyona ibiza kakhulu, ngexabiso le-3.299 yuan, kutshintsho malunga 440 euro.
Into ekhuselekileyo kukuba amaxabiso akho aya kuba phezulu xa ufika eYurophu. Kodwa siyabona ukuba uXiaomi ugcina umgaqo-nkqubo wamaxabiso kunye nefowuni. Ukusukela esi siphelo siphezulu ibiza ixabiso eliphantsi kuninzi lweefowuni ezikuluhlu lwayo Ezifumaneka kwimarike.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Xiaomi Mi 8: Iflegi entsha yentsimbi ngoku isemthethweni
UMiguel Torres sitsho
Ityala elikhulu lohlobo lweempawu endizifumana kwibhetri yalo ... liphantsi kakhulu kwiqela elinje.
Phendula uMiguel Torres
UXiaomi uyiphindaphinde intengiso yakhe kwilizwe jikelele kwikota yokuqala